ဖိုးဖိုးဖွားဖွား ကျန်းမာရေး Archives - Page2of3- My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
သက်ကြီးပိုင်းမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ သတိအမေ့လွန်ရောဂါတစ်မျိုး…. လူတွေဟာ သက်ကြီးပိုင်းရောက်လာပြီဆိုရင် အသက်ကြီးလို့ ရိုးရိုးဟိုမေ့ ဒီမေ့ဖြစ်တတ်တာရှိသလို လုပ်နေကျအလုပ်တွေကိုတောင် မလုပ်နိုင်တော့တဲ့ သတိအမေ့လွန်ရောဂါ Alzheimer’s ဖြစ်လာကြတာလည်းရှိပါတယ်။ Alzheimer’s ရောဂါဆိုတာဟာ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲမှာရောအပြင်လူမှုဘဝမှာရော တော်တော်များများ မြင်ဖူးကြားဖူးတဲ့ရောဂါပါ။ အဓိကကတော့ ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေတဖြည်းဖြည်းချင်းယိုယွင်းပျက်စီးမှုပိုပိုဆိုးလာလို့ပါပဲ။ ဒီ Alzheimer’s…
ဒူးနာ၊ခါးနာ၊တင်ပဆုံနာခြင်းဝေဒနာ Osteoarthritis လို့ခေါ်တဲ့ အရိုးနဲ့အဆစ်အမြစ်တွေရောင်ရမ်းနာကျင်တဲ့ရောဂါဟာ ကမ္ဘာတစ်လွှားမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ အသက်ခြောက်ဆယ်ကျော်တဲ့လူကြီးပိုင်းတွေရဲ့ ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာ ဒီဝေဒနာကိုခံစားရတတ်ပါတယ်။သူ့အလိုလိုဖြစ်တာမျိုးရှိသလို အဆစ်အမြစ်ရောဂါတစ်ခုရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဖြစ်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တခြားရောဂါတွေ ဥပမာ- Haemochromatosis ရောဂါ (ခန္ဓာကိုယ်မှာ Iron အလွန်များတဲ့ရောဂါ)၊အဝလွန်ရောဂါနဲ့ အလုပ်အကိုင်ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားမမှန်ကန်တာကြာတာကနေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးများမှာပိုလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာများကတော့…
All Articlesဖိုးဖိုးဖွားဖွား ကျန်းမာရေးမျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးအမျိုးသား ကျန်းမာရေး
အမျိုးသားများနှင့် ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်း အမျိုးသားထုကြီးမှာ အဖြစ်များဆုံး အမျိုးသားရောဂါတစ်ခုကိုပြောပါဆိုရင်ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်းလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။အသက်၆၀ကျော် အမျိုးသားများရဲ့ ၃ပုံ ၁ပုံ၊ အသက်၈၀ကျော်အမျိုးသားများရဲ့ တစ်ဝက်လောက်ဟာ ဆီးကျိတ်ကြီးနေတတ်ပါတယ်။ဆီးကျိတ်ကြီးတဲ့ လူတိုင်းဟာ ရောဂါလက္ခဏာခံစားရမှာမဟုတ်ဘဲ ဆီးကျိတ်ကြီးတဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပြီး တစ်ချို့ဆိုရင် လက္ခဏာလုံးဝမပြဘဲ Medical check up လုပ်ကြည့်မှအမှတ်မထင်တွေ့တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုလက္ခဏာရပ်တွေခံစားရရင် ဆီးကျိတ်ကြီးနေတယ်လို့…
အိမ်မှာနေတဲ့ ဘိုးဘိုး၊ဘွားဘွားတို့ ဖြစ်တတ်တဲ့ မတော်တဆမှုများ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာတဲ့ ဘိုးဘိုး၊ဘွားဘွားများဟာ အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ မတော်တဆထိခိုက်မှုတွေရှိတတ်ပါတယ်။ အသက်ခြောက်ဆယ့်ငါးနှစ်နဲ့အထက် လူကြီးတွေဟာ တစ်နှစ်ကို တစ်ကြိမ်မက ချော်လဲတတ်ကြပါတယ်။ ချော်လဲတိုင်း အသက်အန္တရာယ်ရှိလောက်အောင် ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာရမယ်လို့ တစ်ထစ်ချမပြောနိုင်ပေမယ့် တင်ပဆုံရိုး၊ ပေါင်ရိုးနဲ့ လက်ကောက်ဝတ်ရိုးကျိုးခြင်း ပါင်ရိုး နဲ့…
ဘိုးဘိုး၊ဘွားဘွားတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ပြောင်းလဲမှုများ ဘိုးဘိုး။ဘွားဘွားတို့ဟာ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာတဲ့အခါမှာ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ဟာ ကျလာတတ်ပါတယ်။ အသက်ခုနစ်ဆယ်ကျော်လာတဲ့အခါမှာတော့ ကိုယ်အလေးချိန်ဟာ သိသိသာသာကျဆင်းလာပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နဲ့ လူမှုရေးပြဿနာဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေ ပါဝင်တယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ်ဆယ့်ငါးရာခိုင်နှုန်းကတော့ အကြောင်းရင်းမရှိပါဘူး။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်တဲ့ဘိုးဘိုး၊ဘွားဘွားတွေမှာ ကိုယ်အလေးချိန် ရုတ်တရက် အလျင်အမြန်ကျဆင်းလာတယ်ဆိုတာ…
ဘိုးဘိုးဘွားဘွားများနှင့် အစားမစားချင်သောပြဿနာ ဘိုးဘိုးဘွားဘွားတွေဟာ အသက်ကြီးလာတာနှင့်အမျှ အစားနည်းလာတတ်ကြပါတယ်။ ဒါရဲ့နောက်ဆက်တွဲဟာ အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းဖြစ်စေပါတယ်။ အများအားဖြင့် အသားဓာတ်ချို့တဲ့ပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကျလာတာ သို့မဟုတ် ဗီတာမင်ဓာတ်တွေချို့တဲ့တာတွေ အတွေ့များတတ်ပါတယ်။ ဒီအစားမစားချင်တာဟာ ၁) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သဘာဝ ခန္တာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုအရ အသက်ကြီးလာတာနဲ့ ပျက်စီးယိုယွင်းလာတဲ့အထဲမှာ လျှာပေါ်က အရသာခံ…
” သစ်အိုပင်ရဲ့ကမ္ဘာ “ “ဆရာ ဝင်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ” ပြူငှါသောနုတ်ဆက်သံနှင့်အတူ အသက်ငါးဆယ်ကျော်အမျိုးသားတစ်ဦး ဒေါက်တာနှင်းငွေ၏ မိဂသီဆေးခန်းတွင်းသို့ဝင်လာသည်။ “ဟုတ်ကဲ့ ဝင်ခဲ့ပါ။ ဘာများဖြစ်သလဲဦးလေးခင်ဗျ။” “ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆရာ။ ကျွန်တော့အမေကိုပြချင်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် အမေက အသက်ရှစ်ဆယ်ကျော်ပြီဆိုတော့ ဆေးခန်းကိုမလာနိုင်လို့ အဲဒါ.. ဆရာများ ကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်အိမ်ကိုကြွဖို့ပင့်ချင်လို့ပါဆရာ။” “ဟုတ်ကဲ့ဗျ။…
အသက်ကြီးရင် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ မျက်စေ့ဆိုင်ရာပြသနာတွေ အသက်ကြီးရင် ဖြစ်လာတတ်တဲ့…. မျက်စိ ပြသနာတချို့ဟာ… စောစောစီးစီး သိရှိပြီး ကုသမှူ မခံယူဘူးဆိုရင် အမြင်အာရုံကွယ်သွားတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်….. လက်ရှိသုတေသနတွေအရ အမြင်အာရုံအားနည်းတဲ့သူတွေရဲ့ 65% နဲ့…. မျက်စိလုံးဝမမြင်တဲ့သူတွေရဲ့ 82% ဟာ…. အသက်ငါးဆယ်ကျော်တွေ ဖြစ်တယ်လို့…
သကြန်တွင်း ဥပုသ်စောင့်မယ့် လူကြီးသူမတွေအတွက် tips မကြာမီ သကြန်တွင်း ကလည်း ရောက်လာတော့မယ်..တချို့လူငယ်တွေက မန်းဒပ်ထိုင်တာ… ရေပက်ခံထွက်တာ.. ခရီးသွားကြတာမျိူးတွေ ရှိကြသလို…တချို့ကျတော့လည်း အိမ်မှာ နားနားနေနေ နားကြတာမျိူးရှိပါတယ်…. လူကြီးအများစုကတော့ တရားစခန်းဝင်တာ…. ဥပုသ်စောင့်တာမျိူးလုပ်ကြပါတယ်…. ဒီတော့ ဒီ သကြန်တွင်းမှာ ဥပုသ်သီလ…
အရိုးတွေနာလို့ ဆိုသော ပြဿနာ…. ယနေ့ ကြာသပတေးနေ့ ပရဟိတဆေးခန်း ထိုင်ရမည်။ ဆရာမ ဒေါ်ယမင်း ခြေလှမ်းတွေ သွက်လက်လို့ ပရဟိတဆေးခန်းဆိုတော့ လာတဲ့လူနာတွေက သက်ကြီးပိုင်းတွေချည်းပဲလေ အဲသည်တော့ လာသမျှ ဒူးနာ၊ ခါးနာ၊ အဆစ်အမြစ်နာ။ ဆရာမ ဒေါ်ယမင်း ရှင်းပြရတာ…